News & Media | Hair n Shanti Nepal
Hair n Shanti Nepal > News & Media
दिल्लीको चर्चित ‘हेयर एन शान्ती सलुन’ नेपालमा, मिस नेपालले गरिन् उद्घाटन
दिल्लीमा १२ वटा शाखा संचालन गरिसकेको ‘हेयर एन शान्ती यूनिसेक्स सलुन’को पहिलो शाखा नेपालमा पनि संचालनमा आएको छ । कमलादीको द राइजिङ मलको अपोजिट रहेको सिद्धार्थ कम्लेक्समा संचालनमा आएको यो यूनिसेक्स सलुनको मिस नेपाल अश्मी श्रेष्ठले उद्घाटन गरिन् । उनले आफूले कपालको स्टाइलमा खासै ध्यान नदिने गरेको भन्दै अब यो सलुनमा नियमित आउने बताइन् । […]
दिल्लीदेखि काठमाडौंसम्म छाएको अन्नुको सैलुन संसार, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रदेखि मिस नेपालको केशसज्जा
फेसन डिजाइनर बन्ने सानैदेखिको सपना । बि.कम. पढ्दै गर्दा यही हुटहुटीले उनी लागिन भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा । दिल्लीमा थिइन दिदी शान्ति, हेयर र मेकअपमा चर्चित नाम । यहीँबाट शुरु भयो अनुजा (अन्नु)को शैलुन यात्रा । अनुजाले सैलुनलाई व्यवसायिक विधा बनाउँदै थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय तालिम र कोर्सहरु सिकिन् । पछिल्लो समयमा राजधानी काठमाडौंमा समेत उनले शाखा […]
फेसन डिजाइनर बन्ने सानैदेखिको सपना । बि.कम. पढ्दै गर्दा यही हुटहुटीले उनी लागिन भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा । दिल्लीमा थिइन दिदी शान्ति, हेयर र मेकअपमा चर्चित नाम । यहीँबाट शुरु भयो अनुजा (अन्नु)को शैलुन यात्रा । अनुजाले सैलुनलाई व्यवसायिक विधा बनाउँदै थुप्रै अन्तर्रा्ष्ट्रिय तालिम र कोर्सहरु सिकिन् । पछिल्लो समयमा राजधानी काठमाडौंमा समेत उनले शाखा […]
नेपाली महिलाको उधमशील हात, भारत हुँदै नेपालमा पनि राज दिदीको प्रेरणाले बनिन लोकप्रिय !
गोबिन्द पोख्रेल, नयाँ दिल्ली, ३१ साउन । फेसन डिजाइनर बन्ने सानैदेखिको उनको सपना थियो, तथापि उनी बनिन व्यूटिक्वीन । बि.कम. पढ्दै गर्दा यही रन्को लिएर उनी लागिन, भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीतर्फ । दिल्लीमा थिइन, उनकी दिदी विश्व शान्ति । हेयर र मेकअपमा चर्चित नाम थियो विश्व शान्ति श्रेष्ठको । यहीँबाट शुरु भयो अनुजा (अन्नु)को पार्लर यात्रा […]
यसरी बनाउने हेयरस्टाइल, दशैंको पहिरन एवं गरगहनासँग कम्बिनेसन
दशैं ‘राम्रो लगाउने’ पर्व पनि हो । यसले फेसनमा नयाँ रुपरेखा तय गर्छ । फेसनसँगै जोडिएको छ, केसको सौन्दर्यपनि । दशैंमा अक्सर क्लासिक फेसन गरिन्छ । कुर्ता सुरुवाल, लेहेंगा, साडी दशैंको पहिरन हुन् । यस्तो पहिरनसँग कस्तो हेयर स्टाइल सुहाउँछ त ? प्रश्न यतिमात्र छैन । दशैंमा महिलाहरु निकै धपेडीमा हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा केसलाई […]
हेयर एण्ड शान्ति सलोनको तेस्रो शाखा जावलाखेलमा ।
ललितपुर पुस २५ । दुई बर्ष अघि काठमाडौंको कमलादीवाट शुरुभएको हेयर एण्ड शान्ति सलोनले तेस्रो शाखा ललितपुरको जावलाखेलमा बिस्तार गरेको छ। यस अँघि सलोनको दोस्रो शाखा काठमाडौकै ठमेलमा सञ्चालमा आइसकेको छ । एक करोड भन्दा बढीको लगानीमा सनोल खोलिएको हेयर स्टाइलीस एवं संचालक अनुजा श्रेष्ठले बताइन्। हामी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले एकेडेमी सहितको सलोन […]
भारतमा चर्चा कमाएको प्रतिष्ठित सैलुन ‘हेयर एण्ड शान्ती’ले नेपालमा शाखा खोलेको छोटो समयमा नै ख्याती कमाउन सफल भएको छ । काठमाण्डौंस्थित दरबारमार्गबाट सुरु भएको ‘हेयर एण्ड शान्ती’को नेपाल यात्राले तिब्रता लिएको छ । हाल सैलुनको शाखा ठमेलको छायाँ सेन्टर र जावलाखेलको मिनिसो एण्ड क्याफे कफिको विल्डिङमा एकसाथ खोलिएको छ । निकट भविष्यमा नेपालका विभिन्न मुख्य […]
कपालको साइनो अब टाउको सुरक्षासँग मात्र रहेन । यो समग्र व्यक्तित्वकै एक हिस्सा हो । त्यसैले त अहिले कपालको सुरक्षा मात्र होइन, सौन्दर्यमा पनि ध्यान दिन थालिएको हो । कपाल कस्तो हुनुपर्छ ? यसको सर्वमान्य इकाई छैन । खासगरी सौन्दर्यको हिसाबले । किनभने अनुहारको बान्की अनुसार कपालको साजसज्जा आवश्यक हुन्छ । प्रकृतिको हिसाबले कपाल स्ट्रेट, […]
‘हेयर एण्ड शान्ति’भारत ब्राण्ड नेपालीमा चर्चा
हिमाल पोस्ट /नयाँ दिल्ली सन् २००१ मा भारतको राजधानी दिल्लीबाट ५०० वर्ग फुटको सानो क्षेत्रफलबाट व्यवसाय सुरुवात गरेको हेयर एण्ड शान्तिले सौन्दर्यको क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भयको छ । भारतको राजधानी दिल्ली लगायत नोएडा,गुडगाऊमा शाखा विस्तार गरेको यो सैलून ग्राहक माझ त्यत्तिकै चिरपरिचित र लोकप्रिय छ । भारतमा एन आई एस ओ सर्टिफाईड NS -EN ISO […]